Dib -u -eegista Naadiga Baabuurka ee Ameerika: Sideen ku Bixiyaa Lacagta | Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Naadiga Baabuurka ee Ameerika 2022: Sideen ku Bixiyaa Lacagta | Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Sawirka laga helo linkedin.com
Haddii aad waligaa la kulantay waxa la moodo inaad ku dhegtay waddada dhinaceeda, baabuurkaagu wuu jabay isagoo aan kaalmeyn, ka xirtay gaarigaaga, ama gaas ka baxay, markaa ma fahmi doontaa muhiimadda ay leedahay joogitaanka Club Club of America.
Naadiga Baabuurta ee Ameerika wuxuu bixiyaa baakadaha kaalmada waddada iyo adeegga gurmadka marka la soo bandhigo kaarka xubinnimada.
Si aad u daboosho kharashka gadashada mid ka mid ah baakadahaan oo xitaa aad kasbato xoogaa lacag caddaan ah, waxaad noqon kartaa mid ku xiran. Waxaad markaa ka iibin doontaa xirmooyinkan dad kale oo aad kasban doontaa guddiyo.
Dib -u -eegistaan ​​Motor Club of America, waxaan ku baari doonaa haddii ay tahay mid sharci ah ama khiyaano ah, sida loo bixiyo, iyo sida loo saxiixo.
Naadiga Baabuurka ee Ameerika (MCA) waxaa la aasaasay sannadkii 1926 -kii William W. Green, oo ahaa maamulaha shirkadda ilaa 1986. Dabadeed dhawr jeer ayaa la iibiyey ka hor inta aysan shirkadda waalidka ee TVC Marketing gacanta ku dhigin.
Badanaa waxaa jira shabakad waddanka oo dhan ah oo heshiisyo la leh jiidisyada maxalliga ah ee kala duwan iyo bixiyeyaasha adeegga gurmadka ee kale. Siinta xubnaha khariidado ama dalxiisayaal kale, ama mararka qaarkood macluumaadka wadista.
Waa maxay Club Club of America?
Naadiga Baabuurka ee Ameerika waa barnaamij gargaar waddada dhinaceeda ah oo bilaabmay 1926 -kii wuxuuna ka horreeyay intarneedka. Ka shaqaynta internetka mar walba waxay ahayd hal shay.
Laakiin shirkaddii mar ahaan jirtay suuq aan toos ahayn ayaa hadda isu beddeshay hab cusub oo adeegyo lagu iibiyo, oo dadka caawisa lacag samee lacag la'aan shaqo dhaqameed.
Naadiga Baabuurka ee Ameerika, oo sidoo kale loo yaqaan MCA, wuxuu siiyaa kaalmo waddada darawallada si looga caawiyo xaaladaha degdegga ah ee waddada - sida AAA oo kale.
Shirkaddu waa shirkad ka dhalatay Suuqgeynta TVC, oo ay ku jiraan TVC Pro-Driver, oo ah nooc MCA ah oo loogu talagalay darawalada baabuurta xamuulka.
Waxay leeyihiin laba qorshe oo loogu talagalay darawalada gaarka ah ee caadiga ah kuwaas oo daboolaya waxyaabaha sida:
Caawinta Wadada - Qaadashada ilaa 100 mayl, qufulidda, shidaalka, beddelka taayirada, baytariyada lacag -bixinta iyo kuwo kaloo badan
Caawinta Safarka - ilaa $ 500 oo dib loogu celiyo baabuurta kirada ah, hoyga, cuntada, iwm.
Waraaqaha Xiritaanka - Kaarkaaga xubinnimada MCA waxaa loo isticmaali karaa beddel dhigaalka amniga.
Kaydka Amniga - Lacag ha ku jirto kaarka xubinnimadaada illaa $ 25,000 oo xabsi ah
Khidmadaha sharciga - heerar kala duwan ilaa $ 2000 iyadoo ku xiran dembiga
Ilaalinta kaarka deynta
Qorista, Aragga, iyo Dhimista Ilkaha - Keydinta illaa 65% kharashyada caafimaadka qaarkood
Kharashyada degdegga ah ayaa dib loo soo celiyaa
Dheefta Isbitaalka - illaa $ 150 maalintii
Kaalmada dhimashada shil
Adeegyadan ay bixisay MCA waa kuwo sharci ah oo waxtar leh.
Waxa kale oo jira barnaamijkooda suuqgeynta ee ku xiran. Tani waxay la mid tahay nidaam suuq -geyn heer ah.
Waxaa jira dad sheegta inay noloshooda ku iibiyaan qorshayaasha MCA oo ay keenaan xubno cusub.
Sideen ugu saxiixdaa Naadiga Baabuurta ee Ameerika?
Waxaad iska diiwaan gelin kartaa internetka adiga oo buuxinaya foom fudud.
Markaad isdiiwaangeliso, waxaad heli doontaa dhowr qalab oo bilawga ganacsiga ah oo kuu oggolaanaya inaad iibiso labadaba qorshooyinka darawalka ee MCA iyo TVC Pro, sida:
Helitaanka khadka caawinta
Bogga internetka ee iibka iyo macluumaadka bilaashka ah
Falanqaynta iyo xakamaynta xafiiska dambe
Tababar bilaash ah oo onlayn ah
Bogagga soo degaya si loogu wargeliyo macaamiisha
Suuqgeyn kale oo waxtar leh iyo qalabka dhismaha kooxda
Waxaad iska diiwaangelin kartaa lammaane ama iskaashi MCA lacag la'aan. Si kastaba ha ahaatee, MCA waxay kugula talineysaa iibsashada xubinnimada si aad u ogaato waxaad suuqgeynayso. Tani ma aha waajib, in kasta oo qaar ka mid ah shabakadaha lammaanaha ay bixiyaan aragtida ah inay tahay.
Ka dib markaad ku guuleysato inaad hesho qof isdiiwaangeliya, waxay ku xiran tahay shirkadda inay ilaaliso. Haddii uu ka noqdo xubinnimadiisa, adiga qaladka ma lihid
Waxaa laga yaabaa inay tahay sababtoo ah xubinnimadu ma bixiso qiimo wanaagsan ama waxaa jira meelo kale oo jaban. Si kastaba ha ahaatee, waa ceeb in aadan ka helin faa'idada buuxda dhammaan shaqadaada adag.
Bogga rasmiga ah ee Club Club of America
Naadiga Baabuurka ee Ameerika hadda wuxuu leeyahay goob rasmi ah https://motorclubofamerica.com/ . Waxaa jira goobo badan oo xiriir la leh oo soo jiidasho leh goob rasmi ah. Tani waxay noqon kartaa mid aad loogu wareero.
Qaar ka mid ah goobaha ku xiran waa:
Marka la eego in ururadan ama xulufadan ay u badan tahay inay iibiyaan xirmooyin xubinimo oo badan, tani waxay u oggolaan doontaa inay sii wadaan iibinta iyo diiwaangelinta shuraakada. Waxay aad u danaynayaan inay helaan guddiyada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Faa'iidooyinka Naadiga Baabuurka ee Ameerika
Waxaad kasbataa guddiyo xirmo kasta oo waddada aad iibiso. Ma jirto guddi ku saabsan qorista shaqaale, laakiin waxaad lacag ka samaysaa iibka uu sameeyo.
Marka ugu horreysa ee aad iska diiwaangeliso shirkadda, waxaa laguu tixgelin doonaa shaqaale cusub saddexda bilood ee ugu horreeya.
Ilaa iyo intaad iibinayso saddexdii biloodba mar oo aad ka diiwaan gashan tahay ugu yaraan hal xubin firfircoon, waxaad sii ahaan doontaa ka -qayb -qaate “firfircoon” oo lacagtii lagu sii wadi doono.
Muddadaada cusub ee ugu horreeya, waxaad si toos ah ugu qalmi kartaa guddiyada aad kasbatay. Si kastaba ha ahaatee, intaa ka dib, waa inaad ka shaqeysaa si aad ugu sii jirto barnaamijka.
Si aad lacag uga hesho Naadiga Baabuurta ee Ameerika waa inaad:
Noqo badan 18 sano jir
Waxaad ku nooshahay USA ama Canada
Buuxi foomka canshuurta ee W-9 (W-8 ee Kanada)
Saxeex oo soo celi Heshiiska Iskaashatada Madaxbannaan
La kulmaan dhammaan shuruudaha ruqsad siinta ee ku xiran wadanka aad degan tahay
Samee deebaaji toos ah bangigaaga
Magdhowga aasaasiga ah ee shaqaaluhu helo marka macmiilku iibsado qorshe waa $ 80 ama $ 40, taas oo ku xidhan qorshaha. Iibiyaha xirmada, waxaad heli doontaa labanlaab lacagtii aad bixisay.
Iibinta badan ee aad sameyso isbuuciiba, ayaa guddigu aad u kasban kartaa iibkiiba.
Waxa aad ku kasbatay guddiyo adiga oo dadka kale iska diiwaangeliya xubinnimada MCA. Shirkaddu waxay bixisa komishannada toddobaadlaha ah. Guddiyada waxaa la xisaabiyaa muddo 17 bilood ah. Haddii xubintaadu ay baxdo ka hor intaanay muddadiisu dhammaan, waxay dib u soo celin doontaa lacag-bixin.
Aragtida iyo Culaysyada of Naadiga Gawaarida Mareykanka
Bilaash inaad ku biirto, in kasta oo aan kugula talineyno inaad iibsato qorshe laga bilaabo $ 9.95 bishii
Waxay iibinayaan adeegyo waxtar leh qaarkood
Waxaa lagu siiyaa lacag toddobaadle ah
Waxaa jiray warar badan oo ku saabsan shirkadda oo ku saabsan internetka hore. Iyada oo tixgelinaysa, MCA waxay isku dayeysaa inay joojiso tan.
Qiimaha alaabta xayaysiinta
Waxaa laga heli karaa Maraykanka iyo Kanada oo kaliya
Dib -u -soo -ceshadu waxay burin kartaa shaqadaada adag
Qaar ka mid ah shaqaalaha MCA waxay kaa codsanayaan inaad noqoto urur
Ma jiro tababar suuqgeyn ah
Tababbarka iyo aaladaha Naadiga Baabuurka ee Ameerika
MCA ma bixiso tababar. Tani waxay ku xiran tahay qofka ku qoray. TVC waxa ay qeexaysaa fikrado tababar oo aad isticmaali karto marka aad qorto. Laakin adiga ayay ku xirantahay in aad dhaqan galiso iyo inkale.
Waxay u muuqdaan inay ku daraan fiidiyowyadooda YouTube channel si joogto ah si cadaalad ah markaa kuwan ayaa mudan in la raaco.
Immisa ayey ku kacaysaa ku biirista Naadiga Baabuurka ee Ameerika?
Waxaad ku biiri kartaa barnaamijka MCA Work from Home barnaamij bilaash ah. Uma baahnid inaad iibsato xubinnimada, in kastoo lagu taliyay si aad u fahanto waxaad kor u qaadeyso.
Haddii aad iska diiwaangeliso mareegaha kale ee lammaanaha, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso qorshe xubinnimo ka hor intaadan u qalmin barnaamijka magdhowga.
Naadiga Baabuurta ee Ameerika ma laha waxyaabo badan oo xayaysiis ah. Waxaad heleysaa degel marka aad xubin ka tahay ama aad iska diiwaangalisay sidii xiriir.
Marka laga reebo taas, bixi dhammaan agabka xayaysiinta ee aad isticmaashid. Marar badan kuwan waxaa si bilaash ah ku bixiya shirkadda aad xayaysiinayso. Kharashyadani waxay isku dari karaan si degdeg ah. Haddii ay dhab ka tahay xayaysiinta MCA, waa inaad bixisaa xayaysiisyada, kaadhadhka ganacsiga, waraaqaha waraaqaha, buug-yaraha, iwm.
Natiijo ahaan, qiimaha bilawga ah waxaa laga yaabaa $0, laakiin alaabada xayaysiisyada, kharashkaagu mar dhow ayuu isku dari doonaa.
Gobolada qaarkood, waxaad u baahan doontaa ruqsad aad ku xayeysiiso xirmooyinka MCA. Lacagta shatiga waxay noqon kartaa ilaa $ 24 iyo ilaa $ 247.
Dib -u -eegista Naadiga Baabuurka ee Ameerika: Ma Sharcibaa mise waa Fadeexad?
Mid ka mid ah dhibaatooyinka aadka u weyn ayaa ah in shaqaale badan oo MCA ah ay dhejiyaan faallooyin ama muuqaalo sheegaya in ay suurtagal tahay in la sameeyo $1000 todobaadkii. Dadka ayaa lagu marin habaabiyay iyagoo u haysta inay fududahay in lacag la sameeyo.
Haddii aysan waxba gaarin, dheh waa la khiyaaneeyay iyo in MCA ay tahay khiyaano. Dembiilayaasha runtii maaha MCA, laakiin waa shaqaalaha kor u qaada oo leh rajooyin been ah.
MCA waa shirkad muddo dheer soo jirtay oo aan macquul ahayn in loogu yeero fadeexad. Waa shirkad xalaal ah oo haysata fursad xalaal ah oo aan qof walba u ahayn.
Waxay taageersan yihiin BBB si ay dhab u yihiin. Waxay la mid tahay shaqada suuqgeynta. MCA waxaa lagu taageeray qiimeynta A+ ee Better Business Bureau, taas oo macnaheedu yahay inaan nahay IRS nidaamsan.
MCA ma aha khiyaamo; waxay mushaharkooda siiyaan waqtigii loogu talagalay waxayna bixiyaan badeecad waxtar yeelan karta.
Si kastaba ha ahaatee, kuma talin lahaa barnaamijkan lacag ka sameynta internetka. Waa inaad aad u shaqaysaa si aad wax u iibiso MCA -na kuma siiso tababar suuqgeyn intarneedka.
www.reddit.com ›antiMLM› faallooyin ›mca_motor…
Motor Club Of America Enterprises, Inc. | Cabashooyinka | Wanaagsan
U dhigma Sharadka USA: Sida loogu guuleysto Lacag wax ka yar 15 Daqiiqo
Dib -u -eegista FlirtBucks 2021 Fadeexad ama Sharci: Lacag lagu siiyo Wada sheekaysiga
10 -ka Ciyaar Ee Ugu Qaalisan Adduunka 2022 -ka
Lacag Bixinta Si Loogu Dhigo Facebook: 15 Siyaabood Oo Lacag Badan Loogu Sameeyo 2022
Markii uu soo baxay cudurka faafa ee coronavirus iyo xannibaadda xun, ganacsiyo badan ayaa loo horseeday inay si fog u shaqeeyaan…
15ka Hab ee ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Diri karo Kaarka Debit
Iyadoo uu sare u kac ku yimid internet-ka iyo horumarka joogtada ah ee dhanka talefannada gacanta, dirista lacagta waxay noqotay...
Sidee ayuu u shaqeeyaa Restaurant.com? Sharci ama Fadeexad | Dib u eegis Buuxda
Waa markii ugu horeysay ee aad tagto meel cusub oo aad rabto in aad wax ka barato…
Ma aha wax aad u fudud in lala socdo kharashaadka ama biilasha qofka gaar ahaan marka la wadaago, tani waa sababta…